General Knowledge Archives - Page2of 110 - Lifestyle Myanmar
ကိုယ့်ရဲ့ ခွေးဆိုတာ မိသားစုလိုပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို ကျန်းမာစွာပျော်ရွှင်စေဖို့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ အစားအစာတွေကို ကျွေးမွေးခြင်းက တကယ်သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူ့အစားအစာတစ်ချို့က ခွေးတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ သင်သိထားပါသလား? လူတွေစားနေတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာ ခွေးတွေကို ကျွေးဖို့ ဘယ်လိုအဆင်မပြေသော အစားအစာတွေကို မျှဝေထားပါတယ်။ ခွေးအဆိပ်သင့်ခြင်း လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အဆိပ်သင့်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကူအညီတောင်းခံမှုအားလုံးရဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းဟာ...
အသက် ၃၀ပြည့်ပြီးနောက်မှာ ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အပြောင်းအလဲအမျိုးမျိုးကို စတင်ကြုံတွေ့ကြရပြီး ပြောင်းလဲမှုတစ်ချို့ကတော့ ကျွန်မတို့အတွက် အံ့သြစရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်မတို့ဟာ အတွေ့အကြုံပုံများကြသော်လည်း ကျွန်မတို့ ဦးနှောက်က ပိုပြီးသေးငယ်လာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၀ပြည့်ပြီးနောက်မှာ ချွေးထွက်နည်းတာကို သတိပြုမိရင် ဒါက အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်မတို့အသက် ၃၀ကျော်လာရင် ကျွန်မတို့ဦးနှောက်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး...
မကြာသေးမီက Google သည် ၎င်းရဲ့ တစ်နှစ်တာ သတင်းအချက်အလက်တွေရှာဖွေမှုစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ဟာ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားသော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်သူကမှ မကြိုက်ကြပါ။ သို့ပေမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထဲမှာ လူတွေဟာ Google မှာ ဘယ်အရာတွေကို အများဆုံးရှာဖွေနေကြမလဲ? အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ ၂၀၂၀ မှာတော့ Google ရှာဖွေမှုသမိုင်းမှာ ထိပ်ဆုံးနေရာကနေ အကြောင်းအရာ ၃ မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။...
ခြင်မတွေသာ လူ့သွေးကို စားသုံးကြသော်လည်း ခြင်ထီးနဲ့ ခြင်မနှစ်မျိုးစလုံးက ညအချိန်မှာ သင့်ကို နိုးစေအောင် စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ာ တဝီဝီမြည်သံကို ထုတ်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ သို့သော် သူတို့ ဒီလိုလုပ်တာဟာ သင့်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့မှာ ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှိကြပါတယ်။ ၁။ နားဖာချေးက သူတို့ကို ဆွဲဆောင်နေလို့ပါ သုတေသနအရ ခြင်တွေကို ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အနံ့ဆိုးနေရာတွေက ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိပ်နေစဉ်မှာ...
ဘေဘီလေးတွေ သွားရည်အရမ်းကျတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ?
သားသားမီးမီးလေးတွေ သွားရည်အရမ်းကျတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ? ဆိုတာကို မိဘအများစု သိလိုကြပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ဒီကိစ္စကို မေမေတို့ မစိုးရိမ်သင့်ပါဘူး၊ ဘေဘီလေးတွေဟာ အသက် ၂လအရွယ်ခန့်မှာ သွားရည်စကျလာပါတယ်။ ဒါကလုံးဝပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘေဘီလေးက အမြဲတမ်းသွားရည်အရမ်းကျတယ်၊ သူတို့လက်တွေပေါ်မှာ၊ ပုခုံးတွေပေါ်မှာ၊ အိပ်ရာခင်းနဲ့ သူတို့နားမှာ တံတွေးတွေ ပေနေတတ်တာကို မြင်ရင် မေမေတို့အနေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှု ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေ သွားရည်အရမ်းကျတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး...
တစ်ခါတလေမှာ (တစ်ချို့ဆို အမြဲတမ်းလိုလို) ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပန်းတိုင်လေးတစ်ခု၊ စိန်ခေါ်မှုလေးတစ်ခုကိုတောင် အောင်မြင်အောင် မလုပ်နိုင်ဘဲ ကျရှုံးသွားတဲ့အချိန်တွေရှိကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ငါက အောင်မြင်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး၊ မဟုတ်ရင်လည်း နောက်လမှပဲ အောင်မြင်အောင်လုပ်တော့မယ်၊ ဒါဆိုလည်း နောက်နှစ်မှပေါ့လို့ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြေသိမ့်လိုက်ကြတယ်။ ဒါဆိုရင် ပျင်းရိခြင်းကို ဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။ ငါ ဘာကြောင့် ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးပေးလိုက်မိတာလဲ? အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။...
သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်က သင်တွေးတတ်တဲ့ တစ်ခြားအရာတွေကို ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းက သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာဖြစ်မလဲ? ဒါ့အပြင် သင်ကိုယ်တိုင်တောင် မသိသေးတဲ့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကရော ဘာတွေဖြစ်မလဲ? ၁။ အနက်ရောင်/ အမဲရောင် အနက်ရောင်ကို သဘောကျတဲ့လူတွေဟာ သန်မာအားကောင်းခြင်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ လှပခြင်းက သူတို့ကာရိုက်တာရဲ့ တစ်ခြားဘက်ခြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို လက်တွေ့ကျကျမြင်တတ်ကြပြီး အလွန်ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းတွေနဲ့ အောင်မြင်တတ်ကြသူတွေပါ။...
ရာသီခွင်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သွားလေရာသယ်ဆောင်သွားရမယ့် ဆောင်ပုဒ်များ
ရာသီခွင်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သွားလေရာသယ်ဆောင်သွားရမယ့် ဆောင်ပုဒ်တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်ပုဒ်က ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝမှာ အမှားတစ်ခုခုမလုပ်မိခင် သတိပေးထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့် ဆောင်ပုဒ်လေးတွေပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ရာသီခွင်လေးအတွက် ဘယ်လိုဆောင်ပုဒ်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်သွားပါဦးနော်။ ၁။ Aquarius ပွင့်လင်းသော စိတ်နေသဘောထားကို လက်ကိုင်ထားပါ။ နှလုံးသားကို ဖွင့်ထားပါ။ သင်ဟာ ဘယ်လိုလူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တစ်ခြားလူတွေကို ချပြဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် အခွင့်အရေးအသစ်တွေ၊ လူသစ်တွေနဲ့...